Iliso linokujonga upelo | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 11, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule veki ndigqibile ukufunda Ukulungisa uLwimi lweeMama: Ukusuka kwi-Olde yesiNgesi ukuya kwi-imeyile, ibali eliTshabalalisiweyo loPelo lwesiNgesi by UDavid Wolman.
Awunakukwazi ukuba yeyiphi i-orthography kunye ne-etymology kwaye kulungile. Ndiyazi ukuba ndingusilarha wegrama kunye nopelo, kodwa le ncwadi indenze ndaziva ndibhetele ngakumbi ngezakhono zam. Kukho izigidi zamagama kulwimi lwesiNgesi, kodwa umndilili wesikolo samabanga aphakamileyo uyazi malunga ne-60,000. Inyani yile yokuba uninzi lwethu alunalo nofifi lokuba uninzi lwamagama athini ngolwimi lwethu!
Ulwimi lwethu lulwimi olungachanekanga kwifowuni kwaye lulwimi olungenakufane lufundwe. Abanye abantu bakholelwa ukuba upelo olugwenxa luphawu lokungazi, kodwa uShakespeare ngokwakhe wayeqamba amagama kunye nokupela amagama njengoko wabona kufanelekile. Waziva iileta namagama anjengodongwe kumchweli. Khawufane ucinge ukuba ndenze awam amazwi ahlaziyekileyo kule bhlog, abantu bangandijongela phantsi (kanye ngaphambi kokuba ndihambe).
Njengokuba sisiya kwi-millennium entsha, sizifumana sithetha amagama ngokubhekisele kwitekhnoloji enokuthi ingaze izifumane nakusiphi na isichazi-magama esisesikweni ... kwaye nabapapashi bezichazi-magama abanakuvumelana ngento eyenza nokuba yintoni engavakaliyo.
Ukuba awukholelwa ukuba siqulunqa amagama amatsha njengoko sihamba, kufuneka ujonge emva kwexesha OK…. okanye yiyo Kulungile… Okanye kunjalo oll ilungile or ole kurreck. Khawufane ucinge, abazukulwana bakho banokuba nenxalenye yeencoko zabo zemihla ngemihla, rofl, lmao, asap, lol, ttfn.
Awuyikholelwa? Njani ngelizwi Scuba, ebikade isisifinyezo sezixhobo zokuphefumla ezingaphantsi kwamanzi. Kuthini nge Blog, eyayingaphantsi kweminyaka elishumi eyadlulayo Uluhlu lwewebhu! Ngelizwi kufike ibhlogi, ibhlog, ukubhloga kunye nokubhloga. Lixesha elinomdla kakhulu kuba uninzi lwamagama, ii-akhronimi okanye iikhowudi ezimfutshane eziveliswayo kwi-intanethi namhlanje zisetyenziswa kwilizwe jikelele.
Kananjalo, inomdla ukuba intengiso kunye nentengiso akufuneki zilandele imigaqo yobhalo. Sineenkampani ezinje ngeGoogle, izinto ezinje nge-iPhone kunye neemveliso ezinje ngeSesmic ezamkelekileyo ngokupheleleyo -kodwa asinyamezelani kakhulu ukupela ngempazamo ngempazamo kumxholo wethu. Ndicinga ukuba inomdla.
Enkosi ngokulungileyo ukuba sinokuxhomekeka kupelo lokuhlola!
Iliso linokujonga upelo,
Iza nolwandle lwam lwe-Pea.
Inqwelomoya lee inqaku lesine lokuhlaziya kwam
U-Miss Steaks ndiyakwazi ukufumana ulwandle.
Iliso libetha izikhwebu uze uthayiphe igama
Kwaye ubunzima bo-XNUMX bathi
Imozulu iliso ndibhale isikhephe ngokungalunganga
Undixelela ngokuthe ngqo ubunzima.
Ndingakukhuthaza ukuba uthathe ikopi yencwadi, luhambo olunomdla kwimbali. UDavid ugcina ukufundwa kukhanya kakhulu. Eyona nto imnandi nangakumbi kukuba ubalisa yonke imvelaphi yesiNgesi njengoko yena, ngokwakhe, etyelela iindawo ezazitshintshiwe. Yi funda kakuhle!
tags: amanani ewonkeavarejiUkuphicothwa kweBrandiprofayile yomthengiimigodi yolwaziumthamo wegama elingundoqozemigodiUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiIvenkile yee-intanethiabantu
Bonke banikwe abanye, abanye banikele konke. Enkosi.
Nov 12, 2008 kwi-11: 01 AM
UBill Bryson incwadi enegama elifanayo neyokuqala yenye yeencwadi ezinkulu, ukuba awuyikhathalelanga indlela yokubhala ka-Bryson engapheliyo. Khange ndiyifunde incwadi kaWolman, ke andazi ukuba kunokubakho phi phakathi.
Novemba 12, 2008 ngo-1: 14 PM
Dan, kungafuneka ndikhe ndiyihlole. Enye yeencwadi zam endizithandayo kulo nyaka uphelileyo yayiyiMbali emfutshane yokuPhantse kwaNgoku konke nguBill Bryson!
Novemba 15, 2008 ngo-4: 53 PM
Ewe, iMbali emfutshane yayiyiyo kanye le nto ndachola uLwimi lweeNkobe xa kusenzeka ukuba ndileqe kulo.